Ubhaka Buddy - Galveston County Food Bank
Ukutya okunesondlo, okulungele abantwana kunikezelwa ngeempelaveki kubantwana abasemngciphekweni kwizikolo zebanga le-K-12 nakwiindawo zokutya zasehlotyeni. Uninzi lwaba bantwana luxhomekeke kwizidlo zesikolo ukubonelela ngesidlo sakusasa nesasemini ngexesha lonyaka wesikolo. Ngexesha lekhefu, njengeempela-veki neeholide, uninzi lwaba bantwana luya emakhaya ukuya kutya kancinci okanye kungabikho nokutya. Inkqubo ye-Backpack Buddy yaseGalveston County Food Bank isebenza ukuzalisa loo msantsa ngokubonelela ngokutya okunesondlo, okulungele abantwana abantwana besikolo ukuba bagoduke nako.
Umntwana kufuneka aye kwisikolo esivunyiweyo senkqubo ye-Backpack Buddy kwaye Umntwana kufanelekile ukuba afumane isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini esisimahla. Ukuba awuqinisekanga ukuba isikolo somntwana wakho samkelwe na kule nkqubo, unokufikelela kumcebisi wesikolo.
Ndimbhalisa njani umntwana wam kwinkqubo ye-Backpack Buddy?
Ukuba isikolo somntwana wakho samkelwe kwinkqubo ye-Backpack Buddy, ungambhalisa umntwana wakho ngokufikelela ku-Backpack Buddy Site Coordinator (uhlala engumcebisi wesikolo okanye ummeli woLuntu ezikolweni).
Yintoni eza kwiipakethi zeBackp Buddy?
Ipakethi nganye inobunzima obuphakathi kwe-7-10 yeepawundi kwaye iqulethe oku kulandelayo kokutya: Iiprotein ezi-2, iziqhamo ezi-2, imifuno emi-2, ukutya okulula oku-2, ukutya oku-1 okuziinkozo kunye nobisi oluzinzileyo eshelfini.
Kukangaphi apho umntwana ofanelekileyo efumana ipakethi yeBackpack Buddy?
Imiqulu ihanjiswa rhoqo ngooLwezihlanu.
Irejista yesikolo yenkqubo ye-Backpack Buddy?
Umsebenzi omele isikolo angafaka isicelo sokujoyina i-Backpack Buddy Programme ngokundwendwela Apha. Emva koko khetha "Faka isicelo sokujoyina i-2020/2021 Backpack Buddy Programme".
Kwimibuzo okanye ngoncedo, nceda imeyile UKelly Boyer.
Izikolo ezithatha inxaxheba
Cacisa i-Creek ISD
I-Arlyne kunye no-Alan Weber kwisikolo samabanga aphantsi- eHouston
IBrookside ephakathi- Abahlobo
CD Landolt Elementary- Abahlobo
Sula iChibi eliPhakathi- eHouston
League City Elementary- League City
I-Ralph Parr Elementary- League City
Iziko leSithuba esiPhakathi- eHouston
Whitcomb Elementary- eHouston
Barber Middle School-Dickinson
IBay Colony Elementary- League City
Isikolo samabanga aphakamileyo iDickinson-Dickison
Hughes Road Elementary-Dickison
UJake Silbernagel Elementary- Dickinson
UKranz Jr oPhakamileyo- uDickinson
McAdams Jr High-Dickinson
San Leon Elementary- San Leon
Iibhali eziphakathi (iWestwood Bales) - Abahlobo
IBurnet Elementary Magnet STREAM- IGalveston
Isikolo esiPhakathi esiPhakathi- iGalveston
LA Morgan Isiseko- Galveston
IZiko leMood leBuntwana laseMoody- eGalveston
IHitchcock yamabanga aphantsi- iHitchcock
Intloko yabantwana yokuqala-iHitchcock
USanta Fe Omnci oPhezulu-uSanta Fe
Iziko lobuNtwana baseCalvin Vincent-iSixeko saseTexas
Blocker Middle School- Texas City
Isikolo samabanga aphantsi saseGuajardo- isiXeko saseTexas
Heights Elementary- isiXeko saseTexas
Kohfeldt Elementary- Texas City
Isikolo samabanga aphakamileyo saseLa Marque- iLa Marque
Isikolo esiPhakathi saseLa Marque- iLa Marque
Isikolo sikaLevi Fry esiPhakathi- isiXeko saseTexas
Roosevelt-Wilson Elementary-iSixeko saseTexas
Simms Elementary- isiXeko saseTexas
Isiliphu semvume- IsiNgesi
Imvume Slip- Spanish